Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment के साँच्चै १८२ मिटर अग्लो ‘स्ट्याचु अफ युनिटी’ टुट्न लागेको हो त ? - Pnpkhabar.com
के साँच्चै १८२ मिटर अग्लो ‘स्ट्याचु अफ युनिटी’ टुट्न लागेको हो त ?
पिएनपिखबर : ३ हजार करोडको लागतमा निर्माण गरिएको सेनानी वल्लभ भाई पटेलको मुर्तिमा एक महिना नहुदै चिरा पर्न थालेको भन्दै सामाजिक संजालमा समाचारहरु आउन थालेको छ। के साँच्चै १८२ मिटर अग्लो ‘स्ट्याचु अफ युनिटी’ टुट्न लागेको हो त ? सामजिक संजालमा यस्तै भिडियो भाइरल भैरहेको छ।
जसमा मुर्तिमा रहेको सेतो भागमा चिन्ह लगाएको छ। तर बास्तबिकता अर्कै छ उक्त सेतो भाग चिरा परेको भने होइन। ठुला ठुला भित्ताहरु जोड्दा यस्तो लाइन देखा पर्छ। सोहि लाइनलाई मानिसहरु ‘स्ट्याचु अफ युनिटी’ टुट्न लाग्यो भन्दै झुटो समाचार फैलाईरहेका छन् ।